Dick's Sporting ngwongwo na-akwọ ụgbọala Social Media na Email | Martech Zone
Dick's Sporting ngwongwo na-akwọ ụgbọala Social Media na Email
Na Mọnde, Nọmba 10, 2009 Monday, October 8, 2012 Chris Lucas kwuru
N’izu gara aga achọtara m ezigbo ihe atụ nke ụzọ adịghị egbochi egbochi iji ahịa email dị ka ụzọ isi mee ka okporo ụzọ gaa elekọta mmadụ media. Email ahụ si Ngwongwo Dick's Sporting.
Ọ bụ ozi dị mfe, nke a haziri nke ọma nke nwere oku dị mfe iji rụọ ọrụ: Soro anyị na Twitter ma nata koodu ego efu:
Gịnị mere o ji dị mma
Dick mere ezigbo ọrụ nke iji ngwa ọdịnala, ịre ahịa email, ịchụpụ okporo ụzọ gaa na otu n'ime ngwa ọrụ mgbasa ozi ọhụụ ọhụụ. Kedu ihe ọtụtụ ndị na-ere ahịa na-eleghara anya bụ na ịnwe ọhaneze mgbasa ozi mmekọrịta abụghị naanị ịtọ ntọala na ntanetị ọ bụla ma chere ka ndị mmadụ chọta gị. Kwesịrị ịkwọ ụgbọala iji mee ka ndị mmadụ bido iso gị! Echiche dị mfe, amaara m, mana na-elegharakarị ya anya mgbe ị na-akọwa atụmatụ mmekọrịta gị.
Ihe kpatara o ji arụ ọrụ:
Ọ bụghị naanị na enwere mkpali ịgbaso Dick's Sporting Goods na Twitter, mana onyinye ahụ, naanị (ma ọ dịkarịa ala nye ndị na-eso ụzọ twitter) na-enye gị ka ị na-enweta ihe ọ nweghị onye ọzọ nwere. Are nọ na Dick's Sporting Goods Twitter okirikiri ị na-erite uru na ya.
Ọ bụ ire ere, ọ bụghị ihe mkpali, ọ chọghịkwa ọtụtụ ọrụ. Nke ahụ karịrị otu - mana ị hụrụ ihe m na-enweta.
E wepụrụ m ọtụtụ mgbochi ọdịnala ka m sonyere ma ọ bụ zụta n'aka Dick site na iji usoro a. Ọ dị mfe ịgbaso njikọ ahụ, pịa soro ma nweta koodu ego ma ugbu a enwere m koodu ego, usoro m bụ eleghị anya gaa na ebe nrụọrụ weebụ ha iji hụ ma ọ bụrụ na e nwere ihe m na-amaghị na achọrọ m ruo mgbe m nwere ngọpụ ịga ahịa - amamiihe!
Ma ugbu a, ha nwere abụọ ikike dabeere na-ajụ ahịa na-ahịa m na… email na Twitter!
Tags: ụlọ ọrụ
Nov 10, 2009 na 5:27 PM
Nke a bụ ihe kpatara ịre ahịa mmadụ ji etinye ego na obodo mmekọrịta ya na ọdịnaya / ngwọta bara uru yana ikere na nnabata. Ọ bụ ezie na "ọdịnala" emere onyinye email dabere na ihe ụlọ ọrụ ahụ chọrọ ire, mbọ ịre ahịa mmekọrịta mmadụ na ibe ya na-elekwasị anya na itinye aka na obodo yana ịmepụta onyinye yana ịkwalite ya
Nov 11, 2009 na 2:37 PM
Ben kwuru nke ọma, ekwenyere m kpamkpam.